QAAR KA MID AH ANTIBIYOOTIKA LAGA HELAY SHIMBIR RUUSH AH - RUSSIA
Guddiga Xakamaynta Tayada ayaa hubiyay tayada cuntooyinka digaaga ee Ruushka. Waxay ogaadeen in mid ka mid ah shaybaarada ay ku jiraan haraaga antibiyootikada. Khubarada ayaa loo doortay 21 xabbo oo hilib digaagdaysan oo laga soo iibiyay kuwa soo saarayaasha ugu badan ee iibiya gudaha si loo xaqiijiyo ku dhaqanka shuruudaha asaasiga ah. Hilibka waxaa lagu hubiyaa sida ay tahay 44 xabbadood, oo ay ku jiraan tirada bakteeriyada, haraadiga antibiotics, polyphosphates iyo chlorine. Daraasadu waxay muujisay in mid ka mid ah saddexda digaagga ay u hoggaansamaan shuruudaha sharciga ah ee tayada iyo nabadgelyada wax soo saarka, iyo sidoo kale heerarka korodhka ee Guddiga, sidaas darteed waxay heli kartaa astaanta tayada Ruushka.
Ma jiro mid ka mid ah shay-baarka qoryaha la ogaaday oo loo yaqaan fosfateh, taas oo loo isticmaalo miisaanka kor u kaca, iyo walxaha chlorine, oo loo isticmaalo in lagu nadiifiyo digaagga. Si kastaba ha ahaatee inta badan digaagga la waraabiyey ayaa ku jira antibiotics. Tusaale ahaan, laba shaybaar oo digaag ah ayaa ku jira xaddi aan la aqbali karin oo tetracycline ah. Shaybaarrada kale waxay ka kooban yihiin sagaal wakiilo antimicrobial, sida nitrofuran, quinolones iyo coccidiostats, kuwaas oo si sharci ah loo oggol yahay Ruushka, laakiin waxaa si adag u xakameynaya dibedda waxayna saameyn taban ku yeelan karaan caafimaadka macaamiisha. Intaa waxaa dheer, laba shaybaar ayaa ku jira bakteeriyada dilaaga ah sida salmonella iyo listeria.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka xisaabinta, Guddiga ayaa ku wargeliyay waaxda dawladda ee waajibka ah in ay lagama maarmaan tahay in la beddelo xeerarka hadda jira iyo in la kordhiyo liiska antibiotics mamnuuc ah.